अपमान होइन सम्मान गर्न सिकौ ! – Complete Nepali News Portal
अपमान होइन सम्मान गर्न सिकौ ! देशको राजनीतिक परिवर्तनमा जनता नै निर्णायक हुने हुदा अाउ जाउक‍ो प्रश्न होइन प्रश्न हो जनताको समर्थन र विस्वास ! किनकि जनता नै सर्वशक्तिमान हुन !! अाजा अाउ जाउसंग मतलव होइन मतलव हो देशको दलाल, पुजीवादी अधिनायकवाद र विदेशी दलालबाट देश बच्नु अहम विषय हो ? कुनै पनि अन्दोलनको ऐजेन्डा हुन्छ त्यो सर्व सम्मत हुनु पर्छ। गाली गलौचले अाफ्नै सम्मानमा चोट पुग्छ।
आन्दोलनको विज्ञापन होइन व्यवहारमा ख‌ै ! राष्ट्रिय झन्डाको अपमान न गर्न जेरी ताम्राकारको सुझाव !!देश बेच्न पाईदैन भ्रष्टाचारी सरकार चाहिदैन ! देश बेच्न तम्तयार भएका देशद्रोही दलालहरुका बिरुद्ध टाउको मा कात्रो हातमा कफन मुठी मा माटो त्येसै माटो मा दफन हुने बाचा कसम खाएर चन्द्र सुर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा जनसागरको उभार ल्याउने राष्ट्रभक्त नेपाली जनता बिरुद्ध विभिन्न अपमानि ढंग ले प्रेत आत्मा झुण्ड भिड भाडाका टट्टु ज्यालादारी जस्ता घिन लाग्दा तुच्छ शब्दवलिको प्रयोग गर्ने केहि मुर्ख हिजडा र तिनै हिजडाहरुकी रखैल निकै सलबलाएकी छन। ति को हुन? को थिए? र काहा बाट परिचालित छन?
तिनिहरु को बिगत र बर्तमान कस्तो थियो ? आज कुन हैसियतका भाषण गर्दै हिडेका छन ? भन्ने कुरा राजसस्था फर्काउने अभियानमा लागेका अग्रज हरुलाई भन्दा पनि सडकमा कवाड बटुल्ने सडक बालबालीका हरुलाई पनि राम्रो संग थाहा छ। तर पनि आगो र दुश्मन लाई कैले पनि सानो र निबर्ल सम्झियो भने ठुलो धोखा ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। राज सस्था फर्काउने अभियानमा लागेका अग्रजहरु ले राजसस्था पुनर स्थापना गर्न सफल भइहाले पनि राजा ले गर्ने कार्य भनेको खाली तल बाट आफु काहां आएका प्रस्ताव हरुमा लाल मोहर लगाउने काम मात्रै हो । बाकि राज्यसंयन्त्रका विभिन्न निकाय र अंग विभाग हरुको हेर फेर र संचालनको प्रक्रिया प्रवाह गर्ने जिम्मा सरकार संचालकहरु कै हो ।
त्येसैले नागरिक सरकारका अगुवाहरु ले राजसस्था बिरुद्घ प्रेत आत्मा मरेर गएको राजसस्था जस्ता तुच्छ शब्दिक भाषा प्रयोग गरेर सडकमा निस्केका स्वभिमानी नेपाली जनताको जनसागरलाई भिड हुल ज्यालादारी भाडाका टट्टु जस्ता ट्याग लगाउने नपुशक छाउडा छाउडी हरुको मुख बन्द हुने गरि नागरिक सरकार गठन भए पछि एक्सनमा जाने र लागु हुने गरि निम्न बुंदाहरु तुरुन्त घोषणा गरियोस।
(क) नागरिक सरकारको सिमा अवधि सम्म वा सरकार मा रहदा सम्म भोजन पानी सवारी साधन औषधि उपचार र विदेशी पाहुना हरुको स्वागत सत्कार मा गरिने खर्च बाहेक अन्य कुनै तलव सुविधा प्राप्त गर्ने छैन।
(ख) राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानन्यायधिश प्रधानमन्त्री मन्त्री र सरकारी उच्च वहदाका कर्मचारी हरुका लागी खरिद गरिएका १ करोड भन्दा माथी का सबै सवारी साधन लिलाम र बिक्रि वितरण गरेर राज्यको ढुकुटी मा दाखिला गरिने छ।
(ग) आज सम्म पुर्व बिशिष्ट व्यक्ति हरुले लिदै आएको सरकारी सुविधा र अब उप्रान्त कुनै पनि पुर्व बिशिष्ट हरुले सरकारी सुविधा पाउने छैन (घ) हाल सांसद नामका निन्द्राका काल गु का भाकारी हरुको ८८४ जानाको लुुटतन्त्रको संख्या बाट घटाएर ज्यादा से ज्यादा १०३ वा सो भन्दा कम गरिने छ।
(ङ) पंचायत काल देखि लुटतन्त्र को महाकाल सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुको सम्पति छानबिन गरिने छ। (च) आज सम्म भ्रष्टाचार अनमियतता दलाली राष्ट्रलाई वा राष्ट्रको ढुकुटी हिना मिना गर्ने गराउनेहरु माथी कडा कानुनि कार्वाही गरिने छ।
(छ) कर छलि गर्ने गराउने हरु माथी हदै सम्मको कानुनि कार्वाही गरिने छ। (ज) सरकारी सम्पति हडप्ने वा खरिद बिक्रि गर्ने दोषी माथी कडा कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ। (झ) ३३ किलो सुन पचाउने हरुलाई
वाइडवडी मा ५ अर्बको भ्रष्ट बचाउने हरुलाई, नेपाल टेलिकम को १२ अर्ब पचाउने हरुलाई , बुढगण्डगी को ९ अर्ब पचाउने हरुलाई, एनसेल को ७२ अर्ब कर मिन्हा गर्ने हरुलाई, मेलम्चिको २५ अर्ब पचाउने हरुलाई, पीपीइका सामाग्रिहरु मा ३४ करोड २६ लाख पचाउने हरुलाई, ७० करोड कमिसन को अडियो पचाउने हरुलाई , निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई बचाउने हरुलाई, कडा भन्दा कडा कानुनि कार्वाही गरिने छ।
(ञ) बलात्कारी देशद्रोही र भ्रष्टाचारीका लागी फांसी को कानुन् बनाइने छ। (ट) अन्त्यमा तर अनिर्वाय- गुणस्तरिय स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क लागु गरिने छ।
(ठ) राजाहरुले बनाएका विदेशीहरुका इसारामा दलालहरुले कौडीको भाउमा बिक्रि गरेका कलकारखाना र उद्योग धन्धाहरु तुरुन्त सम्भार र Mentenec गरेर सुचारु गरिने छ।
(ड) सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमिन वा चल अचल सम्पति कौडीको भाउमा लिज मा दिएर कमिसन खाएको फिज भेटीएमा सख्त कार्वाही गरिने छ। र लिजको सम्झौता रद्ध गरिने छ।
(ढ) स्वदेशमा नै स्वरोजगारको ब्यवस्था र परिपाटी मिलाइने छ। भन्ने बाचा कसम सहित तुरुन्त घोषणा गरियो भने ?
हेरौं देशमा कसरी नयाँ व्यक्तित्ब र नेतृत्वको परिवर्तन नहुने सवाल नै उठदैन। अनि हेरौँ सडकमा आएका जनताको जनलहर सहितको जनसागरको उभारलाई प्रेत आत्माको संज्ञा दिने मगज खुस्केट मुर्ख हिजडा हरुको फ्याउरी हरुको मुख बन्द कसो नहुंदो रहेछ ? राजाको पुर्नस्थापना भन्दापनि देशको प्रश्न र जन ईच्छामा भरपर्ने विषय भएको हुदा सभ्यता र सालिनता तर्फ र आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको हक हनन हुन नदिने कि ? हाम्रो सुझाव यहाँहरूको बिचार। जय जननी। जय मातृभूमि ।